ကံကြမ္မာဆိုတာ ကြိုမမြင်နိုင်ဘူးနော် စိတ်မကောင်းစရာပါ (အိမ်မှာနေရင်း ကားတိုက်ခံရရာမှ ပွဲချင်းပြီးသွားတဲ့ အမျိုးသမီး) – Myanmar Update News
အိမ်မှာနေရင်း ကားတိုက်ခံရရာမှ ပွဲချင်းပြီးသွားတဲ့ အမျိုးသမီး အိမ်မှာနေရင်း ကားတိုက်ခံရမြေဂေါ်ကား ဘရိုတ်ပေါက်ပြီး ထိန်းမနိုင်ဘဲ အိမ်ဝင်ကြုံးရာမှ အမျိုးသမီးတစ်ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံး အိမ်မှာနေရင်း ကားတိုက်ခံရမြေဂေါ်ကား ဘရိုတ်ပေါက်ပြီး ထိန်းမနိုင်ဘဲ အိမ်ဝင်ကြုံးရာမှ
အမျိုးသမီး တစ်ဦးပွဲချင်းပြီး သေဆုံး နမ့်ခမ်းမြို့နယ် ၊မန်းပူးရွာ (ယနေ့) ကြားရမြင်ရတာတေကလဲ စိတ်မချမ်းသာလိုက်တာ လူ့ဘဝရခဲ လှပါတယ်ဆို အခုလို အဖြစ်ဆိုးနဲ့မှ ကြုံခဲ့ရတာ ဝမ်းနည်းစရာပါ လူတိုင်း ဘုရားတရားလေး အမြဲလုပ်ပြီးနေထိုင်သင့်ပါတယ်နော်….
ကိုယ့်အိမ်မှာနေနေရတာတောင် ကိုယ့်ကံကိုကနိမ့်နေတော့ ယခုလိုအဖြစ်နဲ့ကြုံခဲ့ရပီလေအားလုံးပဲ ဘုရား တရား သံဃာ ရတနားသုံးပါကို မမေ့မလျော့ပဲ နေ ထိုင်သွားလာကြဖို့ မမေ့ကြပါနဲ့
ဘုရား တရား သံဃာ ရတနားသုံးပါကို မမေ့မလျော့ပဲ နေထို င်သွားလာကြဖို့ မမေ့ကြပါနဲ့ ဥစ္စာကို ကံစောင့် အသက်ကို ဉာဏ်စောင့်ဆိုသလို တခါတရံမှာကိုယ့်အသိတရားလေးနဲ့ ဘေးပတ်ဝန်း ကျင်ကိုလဲ သတိ ထားသင့်ပါတယ်။
အခုလိုမထင်မှတ်တဲ့အချိန် ကံဆိုးမိုးမှောင်မကျရလေအောင် သေချာလေးဂရုစိုက်ဖို့လိုပါတယ်နော်။ ကမ္ဘကပ်ဆိုး ရောဂါဖစ်နေတာတမျိုး ယခုလို Stay Home ကာလမှာဖြစ်သွားတော့ ပိုပီးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်။အားလုံးကိုသိရအောင်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်……
(Unicode version) ကံကွမ်မာဆိုတာ ကွိုမမွငျနိုငျဘူးနျော စိတျမကောငျးစရာပါ (အိမျမှာနရေငျး ကားတိုကျခံရရာမှ ပှဲခငျြးပွီးသှားတဲ့ အမြိုးသ မီး)
အိမျမှာနရေငျး ကားတိုကျခံရရာမှ ပှဲခငျြးပွီးသှားတဲ့ အမြိုးသမီး အိမျမှာနရေငျး ကားတိုကျခံရမွဂေျေါကား ဘရိုတျပေါကျပွီး ထိနျးမနိုငျဘဲ အိမျဝငျကွုံးရာမှ အမြိုးသမီးတဈဦးပှဲခငျြးပွီးသဆေုံး အိမျမှာနရေငျး ကားတိုကျခံရမွဂေျေါကား ဘရိုတျပေါကျပွီး ထိနျးမနိုငျဘဲ အိမျဝငျကွုံးရာမှ
အမြိုးသမီး တဈဦးပှဲခငျြးပွီး သဆေုံး နမျ့ခမျးမွို့နယျ ၊မနျးပူးရှာ (ယနေ့) ကွားရမွငျရတာတကေလဲ စိတျမခမျြးသာလိုကျတာ လူ့ဘဝရခဲ လှပါတယျဆို အခုလို အဖွဈဆိုးနဲ့မှ ကွုံခဲ့ရတာ ဝမျးနညျးစရာပါ လူတိုငျး ဘုရားတရားလေး အမွဲလုပျပွီးနထေိုငျသငျ့ပါတယျနျော….
ကိုယျ့အိမျမှာနနေရေတာတောငျ ကိုယျ့ကံကိုကနိမျ့နတေော့ ယခုလိုအဖွဈနဲ့ကွုံခဲ့ရပီလအေားလုံးပဲ ဘုရား တရား သံဃာ ရတနားသုံးပါကို မမမေ့လြော့ပဲ နေ ထိုငျသှားလာကွဖို့ မမကွေ့ပါနဲ့
ဘုရား တရား သံဃာ ရတနားသုံးပါကို မမမေ့လြော့ပဲ နထေို ငျသှားလာကွဖို့ မမကွေ့ပါနဲ့ ဥစ်စာကို ကံစောငျ့ အသကျကို ဉာဏျစောငျ့ဆိုသလို တခါတရံမှာကိုယျ့အသိတရားလေးနဲ့ ဘေးပတျဝနျး ကငျြကိုလဲ သတိ ထားသငျ့ပါတယျ။
အခုလို မထငျမှတျတဲ့အခြိနျ ကံဆိုးမိုးမှောငျ မကရြလအေောငျ သခြောလေး ဂရုစိုကျဖို့ လိုပါတယျနျော။ ကမ်ဘကပျဆိုး ရောဂါဖဈနတော ကတမြိုး ယခုလို Stay Home ကာလမှာ ဖွဈသှားတော့ ပိုပီး စိတျမကောငျး ဖွဈရတယျ။ အားလုံးကို သိရအောငျ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော……
စစ်ကိုင်းမှာ Mask မတပ်ဘဲ‌ဈေး ရောင်းလို့ သတိပေးတဲ့ စည်ပင် ဝန်ထမ်းကို မကျေနပ်လို စက်ဘီးစီးလာစဉ် နောက်ကပြေးတွန်းလှဲပြီး အပေါ်ကနေ ထိုးကြိတ်
လူသုံးဦးသေဆုံးခဲ့သည့် ယာဉ်တိုက်မှုမှ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေသည့် YBS-40 ယာဉ်မောင်းကို ဖမ်းဆီးရမိ